Ingqondo yeB | Isingeniso esiphezulu kwihlabathi elikhutshiweyo
Uxolo uthuli lwethu! Ibhlog yeMoB yenza uhlaziyo ngelixa ukhangela!
Yintoni i-Super Introvert?
Ukutshata kunye nokuthandana
Ezempilo kunye nokuzikhathalela
Ingqondo kunye neemvakalelo
Impilo entle kunye nokugula
Ukhathalelo lweenwele olugobileyo
Ukuphila kunye nothando njenge-introvert enovakalelo kakhulu kunye nokuthakazelela kwihlabathi elikhutshiwe
Ngaba ujonge into? Khangela nantoni na uze ungene.
Ukuphila ngokulula Ukutshata kunye nokuthandana
Phakathi kwe-30s, owasetyhini, ongatshatanga kunye noAwesome
Into yokugqibela endizimisele ukuyenza yayikukuqalisa kwakhona ibhlog yam nge rant ngaphezulu kwenye ibhlog. Kodwa xa ndabona isihloko senqaku leVogue.com ekwabelwana ngalo kwi-Twitter kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ii-biscuits zam zatshiswa. “Ndingaba Ngowokugqibela Njani Ndingatshatanga KwiQela Lam?” U-Aka, “Mid-30s and Single: Ngaba Ndilinde Ixesha Elide Ku…
Impilo yengqondo kunye neemvakalelo Ukungenisa okukhulu
Ezantsi iintsuku kunye nendlela yokujongana nabo
Yenzeka kungathethwanga. Ndiyayithiya imihla. Zithini iintsuku ezantsi? Iintsuku ezisezantsi ngala maxesha apho ungena entlokweni yakho ngaphezulu kwento engenamsebenzi kwaye isisidenge. Mhlawumbi ulibele into kwivenkile yokutya, kwaye ngoku uza kufika emva kwexesha ethekweni. Okanye umhlobo akakhange akubize xa uziva ufuna ...
Eyona nto ibaluleke kakhulu
Eyona nto ibalulekileyo KUNYE # 1: GreenBeauty
Kunyaka ophelileyo, entliziyweni ye-COVID-19's yedwa, ndiye ndacanda ngakumbi kunangaphambili kwizibonelelo ze-Intanethi zokhathalelo lweenwele zendalo. Ukuba sekhaya ngokuqinisekileyo kwandinika ixesha elongezelelweyo lokwenza njalo, kwaye ndazi ukuba ayindim ndedwa. Abahlobo, usapho, abantu osebenza nabo, iiforamu ezikwi-intanethi-phantse wonke umlimi wezinwele endandisazi ukuba ugqibe kwelokuba avumele ukukhula kwabo kukhule kancinci ...
Inyaniso kunye neSatire
Ukubuyisa iBhlog emva (aka Happy New Year!)
Imibuliso, nonke, kwaye ninoyolo, Nyakhomtsha! Ndicinga ukuba sonke singavuma ukuba asidananga xa sibona u-2020 esiya. Kodwa ngubani owaziyo-mhlawumbi abanye bethu bangoo. Ndiyazi ukuba sonke sinomdla wokubeka emva kwiintsuku ezingama-365 zokugqibela, kodwa ukuqinisekisa ukuba siyakhumbula ukuba kutheni sinombulelo ngokuvela konyaka omtsha,…
Ingqondo ka-B yokufumana uMsebenzi wenziwe kwakhona
Ndizakuyenza lento ikhawuleze kwaye ibemdaka. Njengeqela, sonke sigqibe unyaka omnye ukuza kuthi ga ngoku ngo-2020. Ngokwam, ndinokuthelekelela nje ukuba kwenzeka ntoni-kwaye uzive, phezu kwako konke okwenzekayo. Mna ngokwam, ibilicacophony ye-coasters yengqondo, yemvakalelo, kunye ne-roller coasters yabaninzi kangaka…
Impilo yengqondo kunye neemvakalelo Inyaniso kunye neSatire
Ndinqwenela ukuba iZilo zingayeka
Kubusuku besibini ngokulandelelana, yenzekile. Ngeli xesha, bendimi ekhitshini lam ndikhangela kwiKhaya lam likaGoogle malunga nokuba ndingayikruna njani ngokukhuselekileyo inyama eluhlaza kubushushu begumbi ngaphambi kokuba iibacteria ziqale ukukhula. Okwangoku, into eyothusayo, isilumkiso sikawonke-wonke sangena kwiscreen se-smartphone yam njengoko yayihleli kwigumbi lokuhlala, ndi…
Izinto zendalo ezenziwayo Izinwele zam ZAKHO (Zakho, nazo)
Kulungile, kulungile-ke le ayisiyiyo eyona blog inomdla okanye inamandla ukubuyisela ukuhamba. Kuyimfuneko, nangona kunjalo, ibaluleke kakhulu kum ngoku. Ngeli xesha lokuhlala ekhaya kuluncedo kum nakubo bonke abanye abantu, ndinexesha elininzi lokucinga ngendlela endiphila ngayo. Abahlobo bam kunye nosapho…
Impilo yengqondo kunye neemvakalelo Ukuphila ngokulula
Usuku Olutsha lwaMazwe ngaMazwe !!!
Ndingathanda ukucinga ukuba ixesha lokonga iMini lalinomdla njengathi sonke ukuqala kosuku oluhle-olu suku apho (nangona kufanele ukuba silubhiyozela mihla le) sibhiyozela ngokusesikweni abantu abasetyhini kuyo yonke indawo. Njengomfazi, bendisoloko ndizamana nesazisi sam — oko kukuthi, ndingangoyena mfazi ubalaseleyo kanjani ukuba ndinokuba nguye? Ndiyazama…
Iindlela Esidibana Nazo
Ndikuthanda njani? Makhe ndibale iindlela. U-Elizabeth Barrett Browning bekufanele ukuba ndiqaphele kwakudala ukuba zizinto eziphambeneyo kuphela ezenzeka ngentsimbi ye-11 ebusuku. Kum, bendizama ukugqibezela umandlalo-we-bhokisi-umandlalo olingana nomnyango wam wangaphambili, njengoko bendilinde omnye wabahlobo bam ukuba aze emva komsebenzi aze andincede…
Ukuzikhathalela Ukuphila ngokulula
2020: Unyaka weziSombululo kunye noTshintsho
Cofa apha ukuya ngqo kwi "zisombululo" zam zoNyaka oMtsha ka-2020! Sisityhilelo esinomdla sokuqonda kakuhle ukuba umdala ukuba awuguquki, ulumke ngobuntu, ukusukela xa wawungumntwana. Ukuba ucocekile njengomntwana, ngokubeka izinto zakho zokudlala emva kokudlala, usenokufumana uyolo olumnandi ekugcineni ucoceko lwakho…
Wamkelekile kwiNgqondo kaB
Igama lam ndinguBrandee. Ndingumbhali, isivavanyi esizimeleyo, kunye nomdlali welizwi onqwenelayo. Ndikwangumntu onovelwano kakhulu, onovelwano, kunye ne-introvert yolona hlobo luphezulu.
Le bhlog ichaza ulonwabo lwam kunye nobunzima bokufumana ulungelelwaniso lobomi njengomfazi omnye wase-Afrika-waseMelika onomdla wobuchule bokuyila, impilo yengqondo, kunye nokhathalelo lweenwele zendalo, ngelixa uhlala unyanisekile "kwi-super introversion".
I-Ayurveda kunye neRejimeni yeeNwele zam
Ngamana 20, 2012
InkoleloInyaniso kunye neSatireEkubhaleni
I-5 (elungileyo) yoLwazi lokuFunda oluPhantsi kwamaphepha angama-200
Inyaniso kunye neSatireEkubhaleniUkungenisa okukhulu
Amahla-ndla okuba ngabantu abaJonge abantu
Matshi 2, 2014
Ukuphila ngokululaUkutshata kunye nokuthandana
Ungazigcina njani ekubeni usisidenge ngaphezulu kweCrush
Agasti 2, 2016
Imemori yexesha Elide (Oovimba)
Imemori yexesha Elide (Oovimba) Khetha inyanga NgoJanuwari 2021 (2) NgoJuni 2020 (2) Ngomhla we-2020 (1) Matshi 2020 (2) NgoJanuwari 2020 (1) NgoNovemba 2019 (2) Oktobha 2019 (4) NgoSeptemba 2019 (5) Julayi 2019 (2) NgoJuni 2019 (2) Ngomhla we-2019 (3) NgoJanuwari 2019 (4) NgoDisemba 2018 (3) NgoNovemba 2018 (3) Oktobha 2018 (2) NgoSeptemba 2018 (5) Nge-Agasti 2018 (4) Julayi 2018 (3) NgoJuni 2018 (2) Ngomhla we-2018 (3) Nge-Agasti 2017 (2) Nge-Agasti 2016 (1) Julayi 2016 (1) Ngomhla we-2016 (1) Epreli 2016 (1) NgoSeptemba 2015 (3) Matshi 2015 (2) Nge-Agasti 2014 (1) NgoJuni 2014 (1) Epreli 2014 (2) Matshi 2014 (1) NgoJanuwari 2014 (1) NgoNovemba 2013 (2) Oktobha 2013 (7) NgoFebruwari 2013 (1) NgoJanuwari 2013 (1) Oktobha 2012 (1) NgoSeptemba 2012 (7) Nge-Agasti 2012 (6) Julayi 2012 (1) NgoJuni 2012 (1) Ngomhla we-2012 (3) Epreli 2012 (1) Matshi 2012 (2) NgoFebruwari 2012 (6) NgoDisemba 2011 (1)
Ngaba ujonga inyani endala yokubhala kunye nezithuba ezinxulumene nencwadi? Cofa umfanekiso.
Ndiyoyika ukonwaba (4) Ndiyoyika ukubhala (5) abafazi aboyikekayo abangatshatanga (3) Iirejimeni zeenwele ze-ayurvedic zabaqalayo (4) ukuba ngumbhali (6) ukuba ngumntu ongcono (7) ukonwaba (10) ukhathalelo lweenwele olugobileyo (6) ukujongana neemvakalelo (9) ukujongana nentiyo (4) Ngaba abantu bayandithanda (3) Ezantsi iintsuku (3) ukubhala ngokukhululekileyo (7) iinwele 4c (8) iingcebiso zokukhula kweenwele zendalo (4) Introvert ebuthathaka kakhulu (5) ndingavuya njani (5) ndingalala njani ngakumbi (3) Ndiyazithanda iinwele zam (5) Ndiyakuthanda ukubhala (13) Inkuthazo yokubhala (3) ubhala nzima (4) Ndifuna ukonwaba (3) uthando olulahlekileyo (3) uthando ulwimi test (3) thanda ibhlog (7) Ingqondo ka-b (19) ndikhumbule uthando (3) iinwele zendalo (10) iimveliso zeenwele zendalo (3) uxolo lwengqondo (5) cwaka (14) umfazi omnyama ongatshatanga (3) Ukuqhuba kwangeCawa (4) ukwazisa okukhulu (9) lowo ubalekileyo (3) uzama ukulungisa yonke into (4) ndiyakuze ndikhule iinwele ezinde (3) ibhloko yombhali (6) Unyango lwebhloko (4) Uncedo lwebhloko yombhali (3) Ukubuyisela kwibloko kumbhali (3) umbhalo (7) Ndizibhalela (9) isikhawulezisi sokubhala (8)
Fumana izithuba ezitsha kwibhokisi yakho engenayo ngalo mzuzu xa bepapasha kule ndawo!
© Copyright 2022 Ingqondo ka-B. Onke Amalungelo Agciniwe. Ukuqaqamba kwePin Pro | Iphuhliswe ngu Blossom Izihloko. zeSITA WordPress.